Inoxolo, ingasese, intle iValley View
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguCatherine
Ngaba ufuna ukubaleka kuyo yonke into? Gxila ngokuzola kwikhaya elingasese, elinoxolo imizuzu eli-15 ukusuka eDubuque. Yakhiwa ngutatomkhulu wam ngeminyaka yoo-1940, kwaye iseyindlu yasefama esebenzayo, le ndlu iye yalungiswa ngo-2016. Indawo yeendwendwe inokufikelela ngasese, kunye neGumbi elikhulu elinebhedi ye-queen yaseMurphy, ibhafu epheleleyo yabucala, isitovu senkuni, indawo yeencwadi, Ipatio yabucala, kunye nemibono entle yentlambo kunye nomlambo ojikozayo. Kukho ukufikelela ngokupheleleyo ekhitshini nakwimpahla.
Yiza uzophumla, kodwa hlala uqhagamshelwe ukuba ukhetha! Umabonakude wentambo, kuquka iNetflix, iHulu, kunye neDVD player kunye neeDVD, umculo, iincwadi, kunye neWifi ziyafumaneka. Indawo inokungena kwayo, kwaye kukho indawo yokupaka eninzi.
Indawo ngumgangatho ophambili wekhaya; umamkeli-zindwendwe kumgangatho wesibini.
Ikhitshi, indawo yokutyela, nendawo yokuhlamba impahla, zonke ezikumgangatho wokuqala, zezokusetyenziswa ziindwendwe kuphela. Indawo yahlulwe ukusuka kumgangatho wesibini ukulungiselela ubumfihlo bakho.
Eli likhaya elilungele izilwanyana, linekati ezimbini kunye nenja kwisakhiwo, nangona kungekho sithuba. Ukuba u-alleji kakhulu, le isenokungabi yindawo yakho. Ukuba ufuna ukuzisa inja yakho, nceda ubuze malunga nokwenza njalo ngaphambi kokuba ubhukishe indawo yakho yokuhlala. Ngokubanzi:
Inja enye (1) eziphethe kakuhle yamkelekile, ngesaziso sangaphambili ngexesha lokubhukisha kwaye ixhomekeke kwisigqibo somninimzi.
1) Ukuba inja yakho ixhalabile, inobudlova, ayiqeqeshelwanga ngokupheleleyo indlu, ihlafuna ifenitshala, njl. Inja yakho iya kuba nexesha elibi, uya kuba nexesha elibi, kwaye ndihlala ngaphezu kwendawo kunye nenja yam, ngoko ke ndiya kuba nexesha elibi, nam.
2) Ukuba ushiya ipropati kufuneka uthathe inja yakho kunye nawe, okanye i-kennel inja yakho.
3) Inja yakho kufuneka ibotshwe ngelixa ingaphandle kwipropati. Kukho indlela enezithuthi, iinkukhu eziphuma simahla, iinkomo, iikati, kunye nenja yam-konke oku kunokuba mnandi ukuleqa, kodwa kunokubangela intlekele.
Ndiphumeze iiprothokholi ezipheleleyo zokucoca iCovid. Ndizibophelele ekungeneni ekuhlaleni, ukucoca ngokucokisekileyo, kunye nokusigcina sikhuselekile sonke.
4.91 ·Izimvo eziyi-35
I-Valley View ibekwe kwindalo. Izikhova kunye nezikhova zivakala ebusuku, kunye namasele onyaka kunye neqakamba. Emini usenokubona amaxhalanga, ookhetshe, intaphane yeentaka ezahlukahlukeneyo, amaxhama nezinye izilwanyana zasendle. Esizeni kukho iikati ezimbini nenja, kunye neenkukhu ezisixhenxe. Kukho izinto ezininzi ezenziwayo ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 ukuya kwengama-25: ukutyibilika, ukutyibilika, ukutyibilika, ukuhambahamba, ukukhwela ibhayisekile, ukuhamba ngebhayisekile, i-antiquing, intengiso yamafama empelaveki, ukonwabela umtsalane kunye nemisebenzi emininzi yaseDubuque, imisebenzi yomlambo, iikhefi, ukutya, ukuhlala. umculo, ukuthenga, kunye nokuzonwabisa. Le ndawo ilikhaya leNew Mellery Abby kunye neTrappistines, kunye neSinsawa Mound, zonke zikufanele ukutyelelwa. IGalena, enye yezona dolophu zinomtsalane eUnited States, kukuhamba nje imizuzu engama-25 ukuwela umlambo. Imbali yaseSt. Donatus kunye neBellevue zisemazantsi. I-Flatted Fifth, kufuphi ne-Bellevue, inika ubomi bomculo we-blues kunye ne-barbecue eyoyikekayo.
I-Valley View inoxolo kwaye intle nokuba lixesha lonyaka. Le yindawo yokuphumla, ukuphumla, kunye nokudibanisa kwakhona.
Umamkeli ukuloo ndawo, kodwa uyakuxabisa ubumfihlo bakho, kwaye uya kufumaneka-okanye angabikho-njengoko ufuna.